ဗြိတိန်က အိုမီခရွန်ပုံစံအသစ်ကို “စုံစမ်းစစ်ဆေးရမည့် မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်” အဖြစ် အမျိုးအစားခွဲထား - Xinhua News Agency
ငွေစာရင်းရှင်းတမ်း ကန့်သတ်ကာလ နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ "ရုရှားသဘာဝဓါတ်ငွေ့ (Gazprom) " အသုံးပြုသူ ထက်ဝက်က ရူဘယ်ငွေအကောင့် ဖွင့်လှစ်လာကြ
လန်ဒန်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ယူကေတွင် အိုမီခရွန် မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ် မျိုးကွဲ ကူးစက်မှု ၄၂၆ ဦးရှိခဲ့ပြီး BA.2 ဟု အမည်ပေးထားသည့် အဆိုပါ အိုမီခရွန်ဗိုင်းရပ်စ် ပုံစံသစ်ကို ယူနိုင်တက်ကင်းမ်ဒမ်း (UK) ၌ အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း ယူကေ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးအေဂျင်စီ (UKHSA) က ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်က ပြောကြားခဲ့သည်။“ခြုံပြီးပြောရရင် မူလအိုမီခရွန် မျိုးရိုးဖြစ်သော BA.1 သည် ယူကေတွင် လွှမ်းမိုးပျံ့နှံ့နေပြီး BA.2 ကူးစက်မှုအစိတ်အပိုင်းများမှာ လက်ရှိတွင် ကျဆင်းနေကြောင်း” ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်စွဲဖြင့် အစောဆုံးထုတ်ပြန်ထားကြောင်း အေဂျင်စီက ထုတ်ပြန်ချက်၌ ပြောကြားထားသည်။
နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ က နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်မှစ၍ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တုပ်ကွေးရောဂါအချက်အလက်များ မျှဝေခြင်းဆောင်ရွက်ချက် (GISAID) သို့ BA.2 မျိုးရိုးဗီဇအစီအစဉ် ၈,၀၄၀ ပေးပို့ထားကြောင်း၊ အဆိုပါ မျိုးဗီဇမှာ မည်သည့်နေရာတွင် စတင်ခဲ့ကြောင်းကိုမူ ဆုံးဖြတ်ရန် မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်က ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားသည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ကွီဇုန်မြို့တွင် နေအိမ်၌ COVID-19 antigen စစ်ဆေးပေးနေသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပထမဆုံးမျိုးရိုးဗီဇကို ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဒိန်းမတ်နိုင်ငံမှ နမူနာပေါင်း ၆,၄၁၁ ခုဖြင့် နမူနာများ အများဆုံးတင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ နမူနာအခုရေ ၁၀၀ ကျော် တင်သွင်းခဲ့သော အခြားနိုင်ငံများမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ၅၃၀ ၊ ဆွီဒင်နိုင်ငံမှ ၁၈၁ နှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံမှ ၁၂၇ ခု တင်သွင်းခဲ့ကြောင်း အေဂျင်စီအရ သိရသည်။
ကပ်ရောဂါကို ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသဖြင့် သန္ဓေပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်အသစ်များအား “မျှော်လင့်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း” အေဂျင်စီ၏ ဖြစ်ရပ်ဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာ Meera Chand က ပြောခဲ့သည်။ “BA.2 က Omicron BA.1 ထက် ဖျားနာမှုတွေ ပိုပြီးဖြစ်နိုင်သလားဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ဖို့ သက်သေမလုံလောက်သေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အချက်အလက်တွေက အကန့်အသတ်ရှိနေပြီးတော့ UKHSA ကတော့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို ဆက်လုပ်သွားမှာပါ” ဟု ဆိုသည်။
ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်က တရားဝင်အချက်အလက်များအရ ယူကေတွင် လွန်ခဲ့သည့် ၂၄ နာရီအတွင်း COVID-19 ကူးစက်မှု ၉၅,၇၈၇ ခုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ရာ စုစုပေါင်း အရေအတွက် ၁၅,၇၀၉,၀၅၉ ဦးနှင့် သေဆုံးသူ ၂၈၈ ရှိခဲ့သဖြင့် စုစုပေါင်းသေဆုံးသူအရေအတွက်မှာလည်း ၁၅၃,၄၉၀ အထိ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယူကေတွင် အသက် ၁၂ နှစ်နှင့် အထက်ရှိသူများ၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည် ပထမဆုံးကာကွယ်ဆေးတစ်ကြိမ် ထိုးနှံပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ၈၃ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဒုတိယအကြိမ်ဆေးထိုးနှံမှု ခံယူထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၆၃ ရာခိုင်နှုန်းမှာမူ အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးများ ထိုးနှံပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Britain classifies new form of Omicron as “variant under investigation”
LONDON, Jan. 22 (Xinhua) — A new form of Omicron named BA.2 has been designateda“variant under investigation,” with 426 cases of the Omicron variant sub-lineage confirmed in the United Kingdom (UK), the UK Health Security Agency (UKHSA) said Friday.
“Overall, the original Omicron lineage, BA.1, is dominant in the UK and the proportion of BA.2 cases is currently low,” with the earliest dated Dec. 6, 2021, the agency said inastatement.
Meera Chand, incident director at the agency, said new mutations are “expected” as the pandemic continues. “So far, there is insufficient evidence to determine whether BA.2 causes more severe illness than Omicron BA.1, but data is limited and UKHSA continues to investigate.”
Photo 1 : People walk on Westminster Bridge in the mist in London, Britian, Dec. 19, 2021. (Photo by Stephen Chung/Xinhua)
Photo2: A medical worker conducts an at-home COVID-19 antigen test in Quezon City, the Philippines, on Jan. 10, 2022. The Philippines reported 33,169 new COVID-19 infections on Monday,anew record daily spike, pushing the number of confirmed cases in the Southeast Asian country to 2,998,530. (Xinhua/Rouelle Umali)